Nihemotra moa io fifidianana io noho ny sakoroka politika sy ady amin'ny faritra atsimon'ny Kongo, izay nahitana faty olona nihoatra ny 40. May ihany koa ny foiben'ny CENI nisy ireo "Machine à voter" mihoatra ny 7000 isa.
Nanapa-kevitra moa ity firenena kongolé, anisan'ny firenena faran'izay mahantra indrindra maneran-tany ity, fa tsy mila ny fanampiana avy any ivelany hiatrehany izao fifidianana ny Filohany izao.
Tsy nahafaly ireo mpanara-maso iraisam-pirenena avy amin'ny Firenena mikambana, ny Union Européenne ny tsy nanomezan'ny CENI kongolé azy ireo fahefana hanara-maso. Nitaraina ihany koa ireo mpanao gazety vahiny, RFI, France 24, Radio France, fa tsy nahazo visa hiditra any Kongo, na ireo masoivoho dia tsy nahazo alalana manokana anara-maso.
Mizotra tsara ny fifidianana, na dia nisy aza ny fahatarana noho ny rotsakorana maro be any an-toerana ankihitriny.